Scapularis – 2kalluunka
Waa maxay Scapular a?
Masiixiyiin badan, oo dhan madaahibta, inta badan xiran crucifixes ama iskutallaabtiisana–qaar ka mid ah u kaliyeeli Rabbiga u, qaar ka mid ah si fudud sida dahabka ama Qurux.
Catholics badan ayaa sidoo kale xiran Scapular a, kaas oo ah a calaamad surto si ay u muujiyaan mid quduuskadhigidda oo ay Ilaah u.
Scapular A leedahay laba burburi qaab maro, mid ka mid hore iyo mid danbe, kaas oo sida caadiga ah midab gaar ah Afika yihiin–bunni, white, cagaaran, iyo guduud, ama casaan–oo inta badan kasoo muuqdo images taqi ah. surto oo waxaa la odhan jiray ka dib markii scapula ah, ama garbaha, in ka badan kuwaas oo waxaa ku gadaaman. Catholics ay aaminsan yihiin in ay haybiyaan gaar ah ku xiran yihiin in la soo xidho Scapular ah.
la Scapular The dib u ogan karo Saint Simon Stock, kuwaas oo ay sheegatay in ay u ka helay Maryan oo bikrad ah markii ay isaga u soo muuqatay in 1251, ididiilo, “Ku alla kii dhinta xiran Scapular this umana ay oggolaan doonaan dabka weligiis ah.”
Ma Scapular a tigidh lagu tago janada?
yaboohaas, taasoo keeni karta Scapular in lagu qaldo sida nooc ka mid ah “tigidh samada,” waa in la tixgeliyaa in view of baridda guud ee Church ee ku saabsan badbaadada.
Church waxa uu barayaa in “xaq ayaa talaabsato noo by Xaraaradda Masiixa” (Miyeesan of Church Catholic, by. 1992). In light of dhimasho Wiilkiisa ee, Ilaah nimco ahaan inoo bixisaa hadiyadda badbaadada, inkasta oo ay kor weli noo inay aqbalaan hadiyadda. caadiga ah, tani waxay ku toobad iyo Baabtiiska (arkaan Acts Rasuulladu, 2:38).
Iyadoo la nadiifiyey dembiga ee Baabtiiska (arki, ka First Warqadda Peter, 3:21), waxaa lagama maarmaan ah in aannu u samray ku jira xaalad ah quduusnimadiisa oo dhan our noolaa, u “kii adkaysta ilaa ugu dambaysta, kaasaa badbaadi doona” (Matthew 10:22). waynayn, in aan fududahay in la sameeyo.
Our iimaanka xagga Ilaah, Intaas waxaa sii dheer, waa in ay ahaadaan firfircoon iyada oo shuqullada jacayl, waayo, annagu waa “shuqullo xaq ku noqday oo aan lagu caddayn rumaysadka oo keliya” (arkaan Warqadda Saint James 2:24). Dabcan, shuqullada waxay leeyihiin mudnaan oo keliya hadii ay ka mideysan yihiin in ay shaqo wayn dhimashada Masiixa ee Laanqayrta. All haybiyaan aan helno sidii raaca socodka Masiix ka kafaaraggudka ah. Tanu waa wixii Rabbigu ka loogu tala galay markii uu sheegay in, “Anigu waxaan ahay geedka canabka ah, idinna waxaad tihiin laamihii. Kii igu jira, oo anna aan ku jiro, isagu wuu midho badan dhala, maxaa yeelay, la'aantay waxba ma aad samayn karto” (John 15:5).
In uu Warqad ku Phillipians ah (2:12), Saint Paul noo taliyaa in “badbaadadiinna ku shaqaysta adiga kuu gaar ah cabsi iyo gariir.” Scapular waa calaamad dibadda ah mid ka mid ah ee diinta gudaha Masiix; iyo sidoo kale waano quduus u ah maalin kasta ka leexataan dembiga iyo xagga Ilaah. Si taas loo gaaro, waxaa jira haybiyaan dhab ah ku lifaaqan soo xidho Scapular ah, sida Mary tilmaamay, taas oo si weyn naga caawin doontaa in shaqada si ay u samray oo quduusnimo–haybiyaan kasbadeen noo by Ciise. In si kale loo dhigo, waxaa xiran hal qoorta kuma filna. Waxa loo baahan yahay in ay ka dhigan tahay wax, taas oo macnaheedu yahay in aqoonsiga qaataha ayaa waxaa ka mid ah waa in ay isaga u abaari ama iyada inay wax ka qabtaan oo wakiil ka ah Ilaah iyo dadka kale.
Fikradda nimcada Ilaah oo u timid in la helay iyada oo shay wax keliya macno markii mid fahmaa incarnational dhinaca iimaanka Catholic.
Soo galaya waxaa gooye ka dib Jidh, imaatinka Masiixa dhulka, taas oo Ilaaha aan la arki noqday arki karo (arki Bawlos Warqad ku Kolosay ah 1:15). Maxaa yeelay, Ilaah baa qaatay foomka aadanaha fadligiisa hadda la gaadhsiiyey kartaa noo waxyaalihii jirka. Tixgeli account Injiilka naagtii kii bogsaday by taabashada daraftiisa Masiixa ee dhar (Mark 5:28), ama kuwa buka oo la bogsiiyey by taabashada marooyin in la sii cadaadisay in ay jirka ka mid ah Paul (ee Acts Rasuulladu 19:11 – 12). Meelahaas waxaa xisaab kitaabiga, nimcadii lagu bogsiiyey waa lagu kala qaado Mu'miniinta iyada oo wax la taaban karo, iyada oo maro sida arrin xaqiiqada.
Waxaa muhiim ah in la xusuusto in markii Mary ballan qaaday badbaadada kuwa xiran Scapular ayay loogu tala galay kuwa yaa xirtaan si daacad ah!
qaataha Scapular weli si xor ah u diidi haybiyaan ku lifaaqan waxaa si oo naftiisa u gudbisaa dembi. Haddii ay sidaa tahay, Scapular u joojiyaan lahaa inay ahaadaan calaamad nolosha ee Masiixa, laakiin noqdaan calaamad ka mid ah xukun, nooc ka mid ah Jees of dalab Ilaah.
Scapular The, ka dibna, ma aha tigidh jannada midna wax a sixir–waa channel ah ee nimco! Magic ayaa sheegay in ay ka shaqeeyaan ay awood u gaar ah, laftiisa ammaanaya. Scapular wuxuu ka shaqeeyaa by xoogga Masiixu, Ilaah ammaanaya, haddii qaataha doorto in uu sidaa sameeyo.